10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा
युरोप वसन्तमा सबैभन्दा सुन्दर छ. पहाडहरू र सडकहरू आश्चर्यजनक रंगहरूमा खिलिएका छन्, प्रत्येक कुना सुन्दर प्रत्यक्ष चित्रहरु मा रूपान्तरण. फ्रान्सेली बगैंचाबाट जंगली अंग्रेजी बगैचा र इटालियन भिला बगैचा, युरोपमा संसारका अरू कुनै पनि ठाउँ भन्दा धेरै बगैंचा छन्. यदि तपाइँ वसन्तको योजना गर्दै हुनुहुन्छ वा गर्मीको छुट्टी युरोप मा तपाईले यी मध्ये कुनै एकमा जानु पर्छ 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा.
1. versailles, फ्रान्स
पानीको फोहरा, हरियो भव्य भूमि, वर्साइलको बगैंचालाई हाम्रो शीर्ष बनाउँनुहोस् 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा.
800 हेक्टर जमिनले भ्यास्सेल्सको बगैचा गठन गर्दछ. घुमाउने पथहरू, 35 किलोमिटर पानी नहर र मूर्तिहरू, दुनिया भर बाट यात्रीहरु लाई प्रभावित. निस्सन्देह, भर्साइल्स एक महान हो पेरिस देखि दिन यात्रा, र एक पटक तपाईं आईपुग्नु भएपछि तपाईं यसको सुन्दरताबाट उडानुहुनेछ.
वर्साइल बगैंचामा कसरी पुग्ने?
बगैंचा वर्सेल्स शहर मा अवस्थित छन्, पेरिसबाट रेलमा लगभग एक घण्टा.
2. Keukenhof, नेदरल्यान्ड्स
धेरै7मिलियन डच ट्यूलिपहरूले हरेक वसन्तलाई सुन्दर केउकेनहफ बगैंचामा स्वागत गर्दछन्. विश्वको सबैभन्दा ठूलो फूल बगैंचाले अप्रिल र मेमा यसको ढोका खोल्यो. ट्यूलिप्स’ खिलने नेदरल्याण्ड मा एक ठूलो घटना हो.
कहाँ हो Keukenhof उद्यान?
बगैचा लिसेमा छन्, बोल्नेस्ट्रिकको मुटुमा. एम्स्टर्डमबाट ट्रेनमा केवल आधा घण्टा.
3. Villa D’este उद्यान, रोम इटाली
इटालीमा पुनर्जागरणको आश्चर्यजनक उदाहरण, Tivoli मा Ville d’Este बगैचाहरु मनमोहक छन्. यो सुन्दर बगैचा एक हो युनेस्को युरोपमा विश्व सम्पदा साइटहरू.
सबै वर्षभर खुल्नुहोस्, को बगैचा 1000 झरना मात्र छ 30 रोमबाट किमी. उल्लेखनीय सुविधाहरूमध्ये एउटा तपाईंले यसको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ टेरेस बगैंचा डिजाइन, र हाइड्रोलिक स with्गीतको साथ पानीका फोउरेनहरू.
Tivoli मा कसरी Villa D’este बगैंचामा पुग्ने?
टिवोली रोमबाट सजिलैसँग पहुँचयोग्य हुन्छ र त्यसपछि रेल स्टेशनबाट शटल बस.
4. इसोला बेला बगैचा, इटाली
इसोला बेला बगैचाहरू मैग्गीओर तालको बीचमा छन्. उत्तरी इटालीको ब्रोरोमेन टापुहरू, बारोक शैली दरबार र इटालियन बगैंचाको प्यारा उदाहरणहरू छन्.
बोर्रोमेन खाडीमा हल्का मौसमका लागि धन्यबाद, तपाईंले यसोला बेला बगैंचामा धेरै दुर्लभ र विदेशी फूलहरू भेट्टाउनुहुनेछ. साथै, पोखरी, फोहराहरू, र सेतो मोर पनि तपाइँको यात्रा चित्रहरु को लागी आश्चर्यजनक सेटिंग पूरा गर्नेछ.
कसरी मिलान बाट इसोला बेला बगैचा सम्म पुग्ने?
Isola बेला बगैंचा एक हो मिलान बाट अद्भुत दिन यात्रा. तपाईं एक घण्टा भित्र ट्रेन र ए द्वारा मिलान केन्द्रीयबाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ डुङ्गा सवारी Stresa बाट.
पेट्रिन हिल पर्यटकहरूको भीडबाट एक सुन्दर वापसी हो. हरियो हरियो, रूखहरू, र घुमाउने पथहरूले तपाईंलाई प्रागको पुल र महलको लुकेका दृश्यहरूमा लैजान्छन्. अविस्मरणीय शहर दृश्यहरूका लागि, तपाईंले बगैंचामा बाटोहरू माथि रहेको पेट्रिन हिल टावर जानुहुन्छ.
पेट्रिन हिल बगैंचा यूरोप मा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा हो. तपाईं सजिलैसँग विश्राम दिउँसो वा आलसी बिहान दृश्यहरू आनन्द लिनमा बिताउन सक्नुहुन्छ.
कसरी पेट्रिन पहाडी बगैंचामा पुग्ने?
प्रागको बीचमा अवस्थित, तपाईं हिंड्न वा शहर को कुनै पनि कुनाबाट बगैंचामा मेट्रो लिन सक्नुहुन्छ.
6. Marqueyssac उद्यान, फ्रान्स
युरोपमा सब भन्दा अनौंठो बगैंचा निश्चित रूप मा फ्रान्स मा Marqueyssac को निलम्बन उद्यान हो. डोर्डोग्ने उपत्यका माथि निलम्बन गर्नु आन्द्रे ले नोट्रे बाहेक अरू कुनैको मास्टरपिस हो, वर्साइल बगैचाको योजनाकार.
बगैंचाको विशिष्टता को टोरीरी कला मा निहित छ 150,000 हस्त-ट्रिम्ड बक्सवुड्स एक भूलभुलैया जस्तो पथहरूको नेटवर्कमा अवस्थित छ. The gardens surround 17th-century chateaux and overlook the Dordogne valley. वास्तवमै एक जादुई भ्रमण को लागी, बिहीबार साँझ आफ्नो यात्रा योजना, जब बगैंचालाई मैनबत्तीको बत्तीले जलाइन्छ.
कसरी मार्कीसाक बगैंचामा पुग्ने?
बगैचा बीचमा स्थित छन् रक्सी क्षेत्रहरु फ्रान्समा. Marqueyssac बगैंचा एक हो2घण्टा रेल सवारी बोर्डो बाट.
7. लुडविगसबर्ग दरबार, जर्मनी
जर्मनमा ब्लुहेंडेन बार्क भनेर चिनिन्छ, अर्थ फूलमा बार्क, लुडविगसबर्ग प्यालेस गार्डन शानदार छ. प्यारा जग्गाहरू सजाउने भर्साइल बगैंचाहरू जस्तै, यस जर्मन बगैंचा हर वसन्त मा गुलाब मा फूल, हरियो बोटबिरुवा, and evenaJapanese inspired garden with Bonsai trees.
सममित बारोक गार्डन फ्रान्सेली शैलीमा दरबारको पूरकको लागि डिजाइन गरिएको थियो.
लुडविगसबर्ग दरबार बगैंचामा कसरी पुग्ने?
बगैचा स्टटगार्टको बाहिर अवस्थित छ, र यो एक हो 30 मिनेट द्वारा सवारी सार्वजनिक यातायात.
8. मेनौ टापु उद्यान, जर्मनी
मेनू फ्लोर टापुमा सुन्दरता यो छ कि त्यहाँ सधैं केहि फुलिरहेको हुन्छ. यो अद्भुत बगैचा ताल तालमा अवस्थित छ. अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु दुबै उष्णकटिबंधीय फूल र एक अंग्रेजी गुलाब बगैचाको लागि उपयुक्त छ.
बगैचा मा सिर्जना गरिएको थियो 19th शताब्दी राजकुमार निकोलास भोन एस्टरहाजी द्वारा शताब्दी. आज यो 45 हेक्टरमा बगैंचाले वसन्त chतु खुल्ने अर्चिड शोको लागि लाखौं आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछ.
मैनौ बगैचामा कसरी पुग्ने?
तपाईं कोन्स्टन्ज ट्रेन स्टेशनबाट बसमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ, वरपरका गाउँहरू बाट कार फेरीहरू, वा कार द्वारा.
9. सिगुर्टा बगैचा भियना, इटाली
पार्क सिगुर्टा बगैचा इटालियन स्वर्ग हो. यो शानदार बगैचा पहिले किसानहरूको विला वरपर एउटा सानो बगैंचाको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो. With time it expanded to the vast garden it is today. Giardino Sigurta garden isasanctuary to 1,500 रूखहरू, र एक मिलियन फूल 300 बिभिन्न प्रकारहरु जुन प्रत्येक वसन्तमा खिलिन्छ. गर्मी मा 18 बगैंचाको ताल र पोखरीहरू विश्वभरका स्थानीय र यात्रुहरूका लागि अभयारण्य बन्छ.
कसरी पार्को Giardino Sigurta मा पुग्ने?
Giardino Sigurta बगैचा छ 8 Garda तालको दक्षिणमा र 25 मन्टुआबाट किमी. तपाईं भेरोनाबाट ट्रेनमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि Valeggio सुल Mincio बस लिनुहोस्.
रिमिनीदेखि भेरोना ट्रेन मूल्यहरू
रोमदेखि भेरोना मूल्यहरू
फ्लोरेन्स लाई भेरोना मूल्यहरु
भेनिस भेरोना ट्रेन मूल्यहरु
10. Hallerbos उद्यान ब्रसेल्स, बेल्जियम
वर्षमा एकपटक, हल्लेमा हालेरबोस वन, एक परी जस्तो बगैंचा मा फूल. मनमोहक ब्लूबेल्स को लागी धन्यवाद, अप्रिलको अन्तदेखि मध्य-मेदेखि हरियो भूमिहरू नीलो राज्यमा परिणत हुन्छन्.
यसबाहेक, Hallerbos बगैचा हिरण र खरायो को घर छ. राजधानीबाट केवल एक घण्टामा ट्रेन सवारी, तपाईं नीलो जंगलको सुन्दर घुमाउरो मार्गहरूमा जान सक्नुहुन्छ. त्यसैले, यदि तपाइँ वसन्तमा बेल्जियम भ्रमण गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, एक सुन्दर द्वारा रोक्न सम्झनुहोस् युरोप मा जंगल र राउंड-ट्रिप लिनुहोस् पहेलो बाटोको तल पैदल.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाइँलाई तपाइँको छुट्टीको योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 10 ट्रेन द्वारा यूरोपमा सबै भन्दा सुन्दर बगैंचा.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा १० अति सुन्दर बगैंचा” तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-gardens-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू भेट्टाउनुहुनेछ - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं / डे गर्न / tr वा / यो र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#गर्मी beautifulgardens europegardens यूरोप ट्राभेलिंग Frenchgarden वसन्त travelbytrain